Claudine Razaimamonjy : Naiditra hopitaly noho ny hamafin’ny tsindry tamin’ny fanadihadiana -
AccueilRaharaham-pirenenaClaudine Razaimamonjy : Naiditra hopitaly noho ny hamafin’ny tsindry tamin’ny fanadihadiana
Nitohy omaly, ny famotorana lalina an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy, tompon’ny Hotel A&C Ivato. Teny amin’ny Chaine Pénale Anti-corruption, teny 67 Ha, indray no nakana am-bavany azy tamin’izany rehefa tontosa ny famotorana nataon’ny Bianco.
Araka izany, nigadona teny an-toerana izy sy ny Bianco niaraka tamin’ny mpitandro filaminana tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. Naharitra teo amin’ny ora enina sy 30 mn teo ho eo ny fakana am-bavany an’ity tompon’ny Hotel A&C ity tao amin’ny Chaine Pénale Anti-corruption.
Tampoka teo, nakana “ambulance” i Claudine Razaimamonjy noho ny tsy fahasalamany. Noho ny tsindry mafy loatra nandritra sy tamin’ny fanadihadiana natao taminy no nisarika io tsy fahasalamany io ka nahatonga azy tsy nahatsiaro tena avy hatrany. Noho izay indrindra, voatery noentina haingana teny amin’ny sampana fameloman’aina teny amin’ny Hopitaly HJRA ny tenany. Tsy nahatsiaro tena nandritra ny ora roa teo ho eo ity ramatoa tompon’ny Hotel A&C ity tamin’izany. taorian’ny ora roa nameloman’ny mpitsabo azy, nahatsiaro tena ny tenany ary tsy maintsy mbola manaraka fitsaboana eny amin’ny HJRA.
Raha hiverenana ny teny amin’ny fakana am-bavany azy dia tsy nisy afaka niditra tao amin’ny faritry ny Chaine Pénale Anti-corruption ny rehetra fa niandry tety ivelany avokoa. Nilamina kosa ny fiandrasana ny fizotry ny raharaha tamin’izany, tsy nisy ny savorovoro.
Ankoatra izay, raha ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny teny anivon’ny Chaine Pénale Anti-corruption indray, naiditra am-ponja vonjimaika i Claudine Razaimamonjy.
Notontosaina omaly maraina ny fanoloana mari-boninahitra ny masoivohon’ny vondrona Eoropeanina, Antonio Sanchez-Benedito, amin’ izao fahavitany ny asany sy ny iraka izay notontosainy teto Madagasikara alohan’ny hihazoany an’i Mozambika , ny minisitry ny raharaham-bahiny malagasy Dovo ...Tohiny